Ogaysiiska Banaynta Guriga iyo Joojinta Liiska | LawHelp Minnesota
Ogaysiiska Banaynta Guriga iyo Joojinta Liiska
Notices to Vacate and Ending a Lease (PDF)351.62 KB
Sample Notice to Vacate letter (PDF)627.06 KB
Ogaysiiska guri banayntu
Waa maxay ogaysiiska guri banayntu?
Ogaysiiska guri banayntu waa warqad lagu joojinayo liiska. Waxaa qori kara adigu ama qolada guriga. Waa inuu noqdaa mid qoran ogaysiiska guri banayntu si u joojiyo liiska soo noqnoqda, oo ay ku jiraan kan afka ah ee bil-bilka ah. Qaarka mid ah liisasku waxa ay yiraahdaan waa inaad bixiso ogaysiis xataa hadii aad qorshaynayso inaad guurto waqtiga liisku uu dhamaanayo. Nooca ogaysiiska ah ee la iska rabo si loo joojiyo liiska waxa ay ku xiran tahay nooca liiska iyo dherarka mudadda kiirada.
Joojinta Liisaska Bil-bilka ah ama Kuwa Kale ee soo Noqnoqda
Liiska soo noqnoqda, mudadda kiradu waxa ay bilaabantaa maalinta kirada in la bixiyo ay tahay waxa ayna socotaa ilaa iyo waqtiga kirada la rabo in la bixiyo laga gaarayo mar labaad. Hadii ay tahay kiradaada in la bixiyo kowda bil walba, mudada kiradaadu waxa ay socon bisha kowdeeda ilaa iyo bisha dhamaadkeeda. Badanaa liisaska soo noqnoqdaa waxa ay leeyihiin muddo kiro oo bil le ah.
Si aad u joojiso liiska soo noqnoqda, sida kan bil-bilka ah, labadiina mid adiga iyo qolada guriga waa khasab inaad bixisaan ogaysiis qoran oo quman ugu yaraan hal kiro oo buuxda ka hor maalinta guurida. Kolkaa, ogaysiisku waa khasab in la geeyo lana helo 11:59 habeenimo ee maalin ka hor kolka kirada bisha xigta ay tahay in la bixiyo hadii aad doonayso inaad joojiso liiska bisha dhamaadkeeda.
Tusaale ahaan: ka soo qaad, waxaad isticmaashaa guri kireynta kirada bil-bil loo bixiyo iyadoo la rabo in kirada la bixiyo bisha kowdeeda. Waxa aad doonaysaa inaad guurto aakhirka bisha Abriil. Waa khasab inaad qolada guriga aad siiso ogaysiis qoran oo ah inaad doonayso inaad guurto ka hor aakhirka bisha Maarso. Qolada gurigaagu waa khasab inay hesho ogaysiiskaaga qoran ee ah ah inaad guriga banaynayso 11:59 habeenimo, ee bisha Maarso 31keeda.
Si uu u noqdo ogaysiis qoran ee quman, warqadaadu waxa ay u baahan tahay inay tiraa inaad joojinayso liiska bil-bilka ah iyo waqtiga aakhirka bisha ee aad guuri.
Kolka, tusaale ahaan, warqadaadu waa inay tiraa, “Waxa aan joojinayaa liiskayga bil-bilka ahaa aakhirka bisha Abriil. Waa aan banayn kana guuri doonaa guriga kirada ah ka hor bisha Abriil 30 keeda.” Waxa aad buuxin kartaa warqada halkan ku lifaaqan ama waxa aad qori kartaa mid aad adigi leedahay.
Hadii aad doonayso inaad guurto, laakiin aadan bixin ogaysiis quman oo ah inaad guriga banaynayso, qolada gurigu waxaa dhici karta inay ku saaraan bil siyaado ah kiradeed ama ka badan xataa hadii aad guurto ka hor inta bisha kale aysan bilaabmin.
Hadii qolada gurigaagu ay rabto inaad ka guurto laakiin aysan ku sii ogaysiis quman oo aad guriga ku banaynayso, waa aad sii joogi kartaa guriga ilaa iyo inta qolada gurigu ay kaa siinayo ogaysiis kale oo quman. Waase inaad kirada bixisaa. Xataa hadii ogaysiisku uusan sax ahayn. Qolada gurigu wali waa ay ka xareysan karaan maxkamad dacwo guri ka saarid ah. Waxa aad u baahan tahay inaad maxkamad tagto aadna tusto xaakimka in ogaysiiska lagu siiyey uusan qumanayn.
OGOW: Dhamaan liisaska soo noqnoqdaa ma wada aha kuwa bil-bil ah. Dhamaan liisaska soo noqnoqda ma wada laha xeer ogaysiin hal-bil ah. Qaar ka mid ah ogaysiisyada soo noqnoqdaa waxa ay u baahan yihiin ogaysiis 2 bilood ah in la bixiyo, ogaysiis 60-cisho ah ama xataa ogaysiis 45-cisho ah, hubi inaad eegto mudadda ogaysiiska ah ee lagaa rabo inaad bixsio si aad u guurto.
Joojinta ama Bedelida Heshiiska Liiska Mudadda Go’ana ah
Liiska mudadda go’an ah waa liis muddo cayiman jira. Taasi badanaa waa hal sanno, laakiin waa ay noqon kartaa muddo kale. Intooda badan liisaska mudadda go’an ahi waxa ay leeyihiin “muddo ogaysiis” ah si uu u dhamaado liisku. Mudadda ogaysiisku waa cadadka waqtiga ah ee ka hor inta aan liisku dhamaan ay adiga ama qolada gurigu ay khasab tahay inay bixiyaan ogaysiis ah in aadan doonayn inaad cusboonaysiiso ama liisku waa dhamaanayaa.
Sida qaalibka ah, liiska waqtiga mudadda go’an ahi lama bedeli karo lama joojin karo ilaa laga gaarayo maalinta ku qoran liiska hadii adiga iyo qolada gurigu aydnaan isku raacin wax kale.
Akhri Heshiiska Liiskaaga
Badanaa, looma baahna wax ogaysiis ah si loo joojiyo liis waqti go’an ah (sida liiska halka- sanno ah) hadii aad doonayso inaad dhamayso waqtiga liiska ku qoran. Laakiin qaar ka mid ah liisaska waqtiga go’an ahi waxa ay u baahan yihiin 30 ama 60 cisho oo ogaysiis ah ka hor waqtiga ay dhamaanayaan. Qaar ka mid ah liisasku xataa waxaa dhici karta inay cayimaan waqtiyada ama maalmaha guurida.
Qaar ka mid ah liisaska waqtiga go’an ahi waxa ay bixiyaan 2 “muddo ogaysiis” ah oo kala duwan si ay u joojiyaan liiska. Liisku waxa uu leeyahay 1 muddo oo ogaysiis ah oo ay leedahay qolada gurigu iyo mid kaa ka duwan oo ay leeyihiin kiraystayaashu. Hadii uu liiskaagu leeyahay 2 muddo oo ogaysiis ah oo kala duwan sida kan oo kale, sharcigu waxa u yiraa waxa aad dooran kartaa mudadda ogaysiiska ah ee adiga kuu fiican si aad u joojiso liiska. Tusaale ahaan, liiskaagu waxa uu leeyahay kiraystahu waa inuu siiyaa 60-cisho oo ogaysiis ah qolada guriga si uu u guuro, laakiin qolada gurigu kaliya waa inay bixisaa 30-cisho oo ogaysiis ah. Sharcigu waxa uu leeyahay kiraystahu waxa uu kala dooran karaa inuu bixiyo 30 ama 60 cisho oo ogaysiis ah.
Qaar ka mid ah liisaska waqtiga go’an ahi waxa ay leeyihiin “qodob ah inay iskood isu cusboonaysiin” ah. Taa macnaheedu waa hadii aadan waxba ku oran qolada guriga, liiskaagu isaga ayaa iskii isu cusboonaysiin 2 bilood ama muddo ka badan. Is cusboonaysiinta iskeed ahi waxa kaliya oo ay sharci tahay hadii qolada gurigu ay kuu soo dirtay warqad xasuusin ah oo ku saabsan arrinta. Warqadu waa khasab in la soo diro ama gacanta lagaaga keeno adiga ugu yaraan 15 -cisho, laakiin aan ka badnaan karin 30-cisho, ka hor malinta aad siin lahayd ogaysiiska ku saabsan qorshahaaga ah inaad guurto.
Si taxadar leh u akhri liiska si aad u eegto inay khasab tahay inaad siiso ogaysiis qolada guriga hadii aad qorshaynayso inaad guurto kolka liisku dhamaado.
Hadii qolada guriga aad uga jirtaa ay aqbasho kirada ka dib dhamaadka liiskaaga, kolkaa waxaad markiiba geli heshiiska liiska ee afka ah ee bil-ka-bilka ah.
Xasuusnow, liisku waa qandaraas labada dhinac ee wada gasha qabanaya! Ha jabin liiska adigoon hore uga sii fakarin waxyaabaha aad kala dooranayso. Hadii ay khasab kugu tahay inaad liiska jabisid, sida ugu fiican ee aad uga bixi kartaa waa:
Inaad la gaarto heshiis qolada guriga. Deegaanada qaarkood waxa ay leeyihiin adeegyo dhexdhexaadin ah oo wax caawin kara.
Waydii qolada gurigu ay diyaar u tahay inay hesho kireystayaal cusub.
Waxaa jira dhowr siyaabood oo lagu bedeli karto ama lagu joojin kara liiska. Waxa ay ku xiran tahay inaad haysato liiska muddo go’an ah ama liiska soo noqnoqda. Hadi labadiina adiga iyo qolada gurigu aad qoraal ahaan iskugu raacdaan in la bedelo ama la joojiyo liiska, taasi waa inay ku filnaato in la sameeyo bedelaada ama la joojiyo kireysiga. Tani waa run hadii uu heshiiska liiska uu afka kaliya yahay ama uu qoran yahay, liiska mudadda go’an ah ama kan soo noqnoqda. Laakiin waa ay ka duwanaan karaa arrintu taa hadii aad haysato Warqada 8 (Section 8). Wac xafiiska gargaarka sharciyda (legal aid) hadii aad qaybto wax su’aalo ah oo arrintan ku saabsan.
Hubi wixii heshiis ahi inay qoraal noqdaan
Hadii wixii heshiis ah aan la qorin, “waxaan iri, waxaad tiri”, muran ah ayaa ha dhow jiri. Waxaa lagu qaban karaa qodobadii heshiiskii liiska hore ku qornaa, oo ay ku jiraan bixinta dhamaan wixii kiro ah ee la rabay in la bixiyo.
Digniin! Hadii aad jabiso liiska adigoon la gelin heshiis qoraal ah qolada guriga, waxaa dhici karta inay noqoto inaad bixiso kirada dhamaan mudadda liiska hadii aysan qolada gurigu dib uga kirayn guriga kireyse kale. Laakiin qolada guriga waajib kuma ah inay isku dayaan ay helaan qof ay kugu bedelaan.
Ka waran hadii aan u baahnahay inaad guuro sababtoo ah dagaal qoys?
Hadii aad doonayso inaad guurto si aad amaan uga noqoto dagaal qoyskaaga dhexdiisa ka jira, waxaa dhici karta inaad horey u joojin karto liiskaaga adigoon heshiis la gaarin qolada guriga. Ka eeg warqada xogta aruursan ee ku saabsan Dagaalka Qoyska dhexdiisa ah, Khashkhashaadaha, Dabagalida, ama Faraxumeynta Dambiga ah: Xaquuqdaada ka Bixida Liiska, Dhibanayaasha Dagaal Qoyska Dhex Mara, Qashqashaadda, ama Fal Dambiyeedka La Xiriira Galmoodka: Xaqa Aad U Leedahay In Aad Ka Baxdo Heshiiska Kirada.
Ma jiraan sababo kale oo aan uga bixi karo liiska?
Maya, xaqiiqdii, waxa ay taasi jirtaa qolada gurriga. Laakiin qolada guriyaha khasab kuma aha inay kaa siidaayaan liiska hadii aad shaqo la’aan noqoto. Qolada guriyaha khasab kuma aha inay kaa siidaayaan liiska hadii aad guri gadanayso ama shaqadaadu ay gobol kale kuu bedesho. Hadii ay dhici karto inaad guri gadato ama shaqo meel kale laguugu bedelay, kolkaa ku qor warkaa liiskaaga marka horeba in sababahaas awgood aad liiska uga bixi kartid.
Qoysaska kireystaasha geeryooda mudadda kireysiga waxaa dhici karta inay horey u joojin karaan liiska la’aanta heshiiska qolada guriga.
Qolada gurigu ma joojin kartaa liiskayga hadii aan u istaago xaqayga kireystaha?
Waxa aad xaq u leedahay in lagaa hagaajiyo wixii halaysan, aad wacdo fatashe ama aad maxkamad ka xareystao dacwo kiro rahmid ah hadii qolada gurigu aysan waxyaabahaa wax ka qaban Sidoo kale waxaad xaq u leedahay inaad ka dalbato qolada gurigu inay xurmayso xogtaada xafidan. Waxyaabahaasi waxa ay qayb ka yihiin xaquuqdaada sharciyanka ah ee kireystaha Minnesota uu leeyahay.
Qolada aad guriga uga jirtaa kaagama aarsan karaan (ku colaadin ama ciil-beelid) u istaaga xaquuqdaada kireystaha. Qolada gurigu ma kordhin karaan kiradaada, kuma waydiisan karaan inaad ka guurto ama ma ay dhimi karaan adeegyadaada iyadoo sababtu tahay u istaaga xaqaaga. Wali waxa aad u baahan tahay inaad ku bixiso kiradaada waqtiga la rabo in lagu bixiyo.
Hadii kireyste ahaan, aad u istaagto xaquuqdaaada aadna codsato in guriga laga hagaajiyo wixii ka halaysan ama aad wacdo guri fatashe ka dibna aad ku hesho ogaysiis inaad guriga banayso ama ogaysiis kiro kordhin ah 90-cisho gudahood, sharcigu waxa uu ka soo qaadi in qolada gurigu ay aar goosanayso hadii aysan cadeyn karin sabab fiican oo ah bixinta ogaysiiska guri banaynta ah.
U qor warqad qolada guriga markiiba oronaysa in ogaysiiska guri banaynta ah ama kiro kordhintu uu yahay aar-goosi waayo wuxuu ahaa 90-cisho gudahood ee ashtakadaadii, ogaysiiska lagu siiyeyna waa baadil. Hubi inaad nuqul kala harto warqada si aad u haysato hadii aad maxkamad ugu baahato.
Hadii qolada gurigu ay ku dhaqaaqdo inay maxkamad ka xareysato dacwo guri ka saarid ah iyadoo sababtu tahay inaad guriga sii joogtay ka gadaal waqtigii inaad guurto uu ogaysiisku guri banaynta ahi uu kuu qabtay, ama aadan bixin kirada cusub, u sheeg xaakimka waxa aad sameysay ama aad codsatay (hagaajinta, iwm.) 90-cisho gudahood ka hor inta aadan helin ogaysiiska.
Waydiiso maxkamada inay bilowdo tirinta mudadda 90-cisho ah laga bilaabo waqtiga ay qolada gurigu heshay waxyaabaha aad codsatay inay sameeyaan, sida hagaajinta guriga wixii ka halaysan.
Ogow: hadii qolada gurigu ay kordhiso kiradaada aadna maxkamad aadayso, waa khasab inaad u dhiibto kiradaadii hore maxkamada.
Xaakimku waa uu diidi guri ka saarida hadii qolada gurigu aysan cadeyn karin sabab fiican oo aan ahayn ka aarsi in ogaysiiska loo bixiyey. Hadii ay mudaddu ka dheerayd 90-cisho, waa inaad adigu cadeysaa in qolada gurigu ay isku dayeyso inay kaa aarsanayso.
Ma jiraan xeerar gaar ah oo ku saabsan ogaysiisyada banaynaha Guryaha xilliga qaboobaha?
Qolada guriga iyo kireystaha waa ay bixin karaan ogaysiis ay ku joojinayaan liis bilaha qaboobaha. Xataa hadii aadan bixin “ogaysiis quman” kolka guriga aad ka guurayso xilliga qaboobaha, mar walba u sheeg qolada guriga inaad guurayso. Kiraystayaashu waa khasab inay siiyaan qolada ugu yaraan 3-maalmood oo ogaysiis ah ka hor inta aysan guurin waqtiyada u dhaxeeya Nofeembar 15 keeda ilaa iyo Abriil 15 keeda. Kireystayaasha aan siinin ogaysiiskan 3-maalmood ah waxaa dhici karta in lagu helo dambi ah darajo dhexe (misdemeanor) ah. Sababta sharcigani waa tuubooyinka guriga waxaa dhici karta inuu wax u geysto qaboowgu hadii gurigu uu cidla’ yahay uusana kulayl lahayn.
Ka waran hadii kirada aan bixiyo ka dib xilliga guurida ee ogaysiiska guri banaynta?
Hadii qolada gurigu ay kaa qabato lacagta kirada adiga ka dib waqtiga laguugu talagala inaad guurto, ogaysiiskii guurida waxaa dhici karta inuu joojiyo sharcigu. Qabashada kiradu waxa ay cusboonaysiin liiska.
La hadal qareen ka hor inta aadan ka soo qaadin in ogaysiiskii ahaa inaad guurto la baajiyey sababta oo ah qolada gurigu oo kaa qabatay lacagtii kirada.